–कृष्ण न्यौपाने दमौली, जेठ २३ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजनाका लागि तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकाले योजना छनोट गरेको छ । नगरपालिकाले
सञ्चिता घिमिरे ललितपुर, जेठ २३ । झण्डै १६ वर्ष पहिलेदेखि रातो मछिन्द्रनाथको मूल पूजारीका रुपमा देवताको सेवामा लाग्दै आउनुभएको कपिल बज्राचार्य ६७ वर्षको हुनुभयो ।
काठमाडौँ,जेठ २३ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात् गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।
भद्रपुर, जेठ २३ । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएपछि पूर्वका चार जिल्लाका स्थानीयवासी प्रभावित भएका छन् । नेपालले आयात गर्दै आएको पेट्र«ोलियम पदार्थ
लहान,जेठ २३ । सरकारले अतिविपन्न दलित परिवारलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम सिरहा र सप्तरीमा अलपत्र परेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने
काठमाडौँ, जेठ २३ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को आज बस्ने भनिएको सचिवालय बैठक स्थगन भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी
पोखरा, जेठ २३ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कास्कीद्वारा अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीयवासीले
वीरगञ्ज, जेठ २३ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले हुण्डीको कारोवार गर्ने दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । बुधबार पर्सा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं १६
विराटनगर,जेठ २३ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ ले चिकित्सा शिक्षा र सेवामा रहेको विकृति हटाउने बताउनुभएको छ
जाजरकोट, जेठ २३ । धन कमाएर परिवारलाई खुशी बनाउने र छोराछोरीका समस्या टार्ने भन्दै डोल्पाका पाटनमा गएका आठ यार्सा सङ्कलकको मृत्यु भएको छ । मृत्यु
काठमाडौँ, जेठ २३ । नेपालसहित ४३ मुलुकका पर्यटन व्यवसायीको जमघट रहने ‘हिमालयन ट्राभल मार्ट’को तेस्रो संस्करण आजदेखि काठमाडौँमा शुरु हँुदैछ । पर्यटन क्षेत्रको कुम्भमेलाका
काठमाडौँ, जेठ २३ । ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को अध्यक्षमा तीन जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको उक्त परिषद्को यही जेठ
विदुर, जेठ २३ । नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिकास्थित समुन्द्रटारमा सुविधासम्पन्न प्रहरी भवन निर्माण गरिएको छ । सो भवनको बुधबार प्रदेश नं ३ प्रहरी कार्यालय हेटाँैडाका
साँखु, जेठ २३ । विसं २०३३ र २०४५ को मापदण्डअनुसारका मूल सडक विस्तार हुन नसकेका बेला गोकर्णेश्वर नगरपालिका–१ मा भित्री सडक विस्तार गर्ने नाममा वर्षौँदेखि
काठमाडौँ, जेठ २३ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेपालका लागि इरानका राजदूत डा. अलि चेगेनीलेबीच आज
विदुर,जेठ २३। आजदेखि शुरु भएको ‘दोस्रो नुवाकोट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिता’मा घरेलु टोली नुवाकोट–११ विजयी भएको छ । बट्टार बहुमुखी क्याम्पसको मैदानमा भएको उक्त
इजरायलबाट कृषि प्रविधि ल्याउँछौँ ः प्रधानमन्त्री
काठमाण्डौं । जेष्ठ २३ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन इजरायलबाट आधुनिक कृषि प्रविधि ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताउनुभएको छ ।
ज्यो. पं ओजराज उपाध्याय लोहनी । काठमाण्डौं । जेष्ठ २३ ।विक्रम संवत २०७६ साल ज्येष्ठ २३ गते बृहस्पतिबार तदनुसार २०१९ जुन ६ तारिख ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष
काठमाडौँ, जेठ २२ । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक रुपैँया घटाएको छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि,
–प्रकाश अधिकारी÷दीपेन्द्र शर्मा सुर्खेत, जेठ २२ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा रु एक करोड बढी लागत अनुमान भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन
काठमाडौँ, जेठ २२ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले बिहीबार जिल्ला कमिटीको इञ्चार्ज र सहइञ्चार्ज टुङ्गो लगाउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको
काठमाडौँ, जेठ २२ । प्रधानसेनापति राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । लगनखेलस्थित सैनिक शारीरिक ताीलम तथा
काठमाडौं, जेठ २२ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (संयुक्त) का अध्यक्ष पशुपति शमशेर जबराले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनको लागि छिट्टै सशक्त सडक संघर्षमा उत्रिने घोषणा गरेका छन् ।
काठमाडौं, २२ जेठ । ब्लड डोनर्स एशोसिएशन नेपाल (ब्लोदान) ले यही जुन १४ तारिखमा मनाउने विश्व रक्तदाता दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा साताव्यापी कार्यक्रम गरेर मनाउने भएको छ
काठमाडौँ, जेठ २२ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकार विराट अनुपमलाई टेलिफोनबाट कुराकानी गर्ने क्रममा धम्की दिएको घटनाप्रति विरोध जनाएको
Pages 488 : You are at page 201 of 488